Hanti Dhowrka Qaranka “Ku takri fal awoodeed iyo mid dhaqaale ayaa Doorashada ka muuqata” | Baydhabo Online
Hanti Dhowrka Qaranka “Ku takri fal awoodeed iyo mid dhaqaale ayaa Doorashada ka muuqata”
Hanti Dhowrka Qaranka Somaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo ka hadlaayay arimaha Doorashada Somaliya ayaa sheegay inuu jiro ku takri fal awoodeed oo ay ku kaceen madaxda Dowladda Federalka Somaliya.
Wareysi uu siiyay Idaacada VOA, ayaa wuxuu ku sheegay in la diiday Xafiiska Hanti dhowrka Qaranka Somaliya inuu isla xisaabtan dhab ah ku sameeyo qarashaadka soo galay Guddiga Doorashada dadban ee dalka, isaga oo masuuliyada arintaasina dusha ka saaray Guddoomiyaha Guddiga Doorashada dadban.
Guddiga Doorashada dadban waxaa soo galay dhaqaalo fara badan oo ka soo xarooday isdiiwaangelinta Liiska Aqalka sare iyo midka aqalka hoose ee Gobolada dalka ka socda.
“Shaqsiyaadka Qaarkood kursiga doonaya ayaa axsaab iyo Ururo Lacag haysta oo ganacsato ah ayaa meesha ku jira iyaga ayaa ku tartamaya, nin waliba wuxuu aaminsan yahay hadii uu Kursi Xildhibaan inuu wax boobi karo oo uu dhici karo, qaarkood ayaa meesha ku soo geli kara, ilaa hada cid garanaysa malahan Guddoonka Doorashooyinka ayaa qaadaya Masuuliyadaasi isla xisaabtankiina, waa la diiday waan ka wada hadalnay qoraal ayaan u dirnay Madaxweynaha ayaan ogeysiin siinay, Ra’iisul Wasaaraha ayaan siinay iyo Guddoonka Baarlamaanka, waxaan dhahnay maadaama aan nahay Hay’adihii u xil saarneyd arintaan inaan isla xisaabtan sameyno ayaan rabnaa, laakiin taasi ma aysan dhicin Somaliya marka la joogo ma jirto isla xisaabtan dhab ah, Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ayaana qayb ka ah arintaasi.” Ayuu yiri Dr. Nuur Faarax Jimcaale
Dr. Nuur Faarax Jimcaale, ayaa ku eedeeyay Madaxda ugu sareysa Dowladda Federalka Somaliya inay u adeegsanayaan Doorashada Dhaqaale, isaga oo tusaale u soo qaatay shaqsiyaadka ku dhaw Madaxweynaha ee Kuraasta Aqalka hoose ku soo baxay.
“Madaxda Sare intuba waxa ay adeegsanayaan lacag waana wax muuqda weeyen, waxaana ay ka muuqataa sida Doorashooyinka ay ugu soo baxeen shaqsiyaad Xafiisyada Dowladda ka tirsan.” Ayuu yiri Hanti dhowrka.
Ugu dambeyn Hanti dhowrka ayaa sheegay inay baarayaan qarashaadka Dowladda ee qasnada dhexe ku jira in loo adeegsaday Doorashooyinka ka socda dalka.
“Mar hadii ay jirto ku takri fal awoodeed meesha ay ka jirto taana qasab waaye wax diidayo ma jirto, baaris ayaan wadnaa inaan ka hor dhacno ma rabno laakiin waxaan ka hadlay ku takri fal awoodeed iyo lacago sicir barar ah oo musuq maasuq ah sicir bararka ayaa koow ah ku takrifal awoodeed ayaa ku xigta, isticmaalka lacagta qasnada dhexe baaris ayaan ku wadnaa iyo cida isticmaashay.
Madaxda Dowladda Federalka Somaliya ayaa dhaqaale fara badan oo caqliga diidaya u isticmaalay Doorashooyinka aqalka hoose ee dalka, si shaqsiyaad Madaxweyne Xasan saaxiib dhaw la’ ah saaxada siyaasada Somaliya mar kale ay uga soo dhex muuqdaan.